पूर्व उपकुलपति दीक्षितको निधनमा शोकसभा – ::नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान::
२०७६ भदौ १ गते, काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति, आजीवन सदस्य एवम् मूर्धन्य साहित्य साधक मदनमणि दीक्षितको निधनमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा शोकसभाको आयोजना गरियो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा देवकोटा सभाकक्षमा आयोजित शोकसभामा बोल्दै कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले पूर्वीय दर्शन र वैदिक वाङ्मयका विशिष्ट साधक दीक्षितले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा उपकुलपति हुँदा नेपाली साहित्यलाई विश्वस्तरमा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँको भौतिक शरीर हामीबिच नरहेता पनि उहाँका सत्कर्म, कृति र योगदानका कारण उहाँ सदैव अमर रहिरहनुहुने छ ।”
दीक्षित उपकुलपति हुँदा प्राज्ञ परिषद् सदस्य रहनुभएका पूूर्व कुुलपति बैरागी काइँलाले दीक्षितसँग काम गर्दाका सम्झनाहरू सुनाउँदै उहाँ अभिभावक भएको बताउनुभयो । उहाँले विशिष्ट विद्वान्हरूमा फरक स्वभाव र चरित्र पाइने दाबी गर्दै त्यस्तो स्वभाव दीक्षितमा पनि पाएको उल्लेख गर्नुभयो । वैदिक वाङ्मयका विशिष्ट साधक दीक्षित आफ्नो ब्रम्हले देखेका कुरा लेख्ने आँटिला लेखक भएको काइँलाको दाबी थियो ।
दीक्षितको व्यक्तित्व तथा कृतित्वमाथि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति तथा वरिष्ठ समालोचक प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीले प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले माक्र्सवादी दर्शन र पूर्वीय तथा वैदिक दर्शनलाई फ्युजन गरेर उत्कृष्ट सृजना गर्नुहुने दीक्षितले नेपाली आख्यान साहित्य जगत्लाई समृद्ध बनाएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । भन्नुभयो, “दीक्षित युगको पनि महायुग हुनुहुन्थ्यो ।”
नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान दिनुभएका दीक्षित जीवनको उत्तराद्र्धमा पनि निरन्तर साधनामा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो । प्रा.डा. त्रिपाठीले भन्नुभयो, “आफ्नो हात कलम चलाउन असमर्थ हुँदा पनि लेखन सहयोगी राखेर उहाँले लेखिनै रहनुभयो ।” आफैँले लेख्न असमर्थ अग्रज स्रष्टाहरूलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले लेखन सहयोगीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उहाँको सुझाब थियो ।
शोकसभामा सदस्य सचिव प्रा. जगत्प्रसाद उपाध्यायले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा तयार पारिएको शोकप्रस्ताव पढेर सुनाउनुभएको थियो । पूर्व उपकुलपति तथा आजीवन सदस्य स्व. दीक्षितको शोकमा भदौ २ गते सोमबार प्रज्ञा–प्रतिष्ठान कार्यालय बन्द रहने कुलपतिले जानकारी गराउनुभयो ।
निमोनियाबाट ग्रसित दीक्षितको ९८ वर्षको उमेरमा साउने ३० जनैपूर्णिमाका दिन आफ्नै निवासमा निधन भएको थियो । दर्जनभन्दा बढी उत्कृष्ट कृतिका स्रष्टा दीक्षितले ‘माधवी’ उपन्यासका लागि मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो ।